Isithintelo-free 2 igumbi amagumbi kwi Canal North Baltic Sea
Westerrönfeld, Schleswig-Holstein, Germany
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguNiels
Ikhululekile, ikhanyayo, yangoku, i-56 m², isicwangciso somgangatho ovulekileyo kwisixhobo somgangatho ophezulu kunye nemigangatho yoyilo. Ngokutyhileka okuninzi ngaphandle, ejonge emazantsi-ntshona kunye nethafa layo.
Indawo yokutyela ekhitshini ene-dishwasher, ifriji, i-oveni yokuhambisa, i-ceramic hob, i-convection hood, inkqubo yokwahlula inkunkuma kunye nekhawuntara ngokubhekisele kwindawo yokuhlala kunye neyokutyela.
Indawo yokugcina iibhayisikili ezi-2 kwindawo engaphantsi inokwenzeka
Ukufudumeza okuphantsi komgangatho olawulwa kungena komoya kunye nokubuyisela ubushushu.
I-TV (intambo) WLAN simahla.
Ukugqitywa kuka-2019 emva kokulungiswa ngokupheleleyo!
Yakhelwe ngo-1962 njengekhemesti yaseGreif enevenkile yeziyobisi, i-hairdresser kunye ne-1 indlu, esetyenziswa njengevenkile yevidiyo kule minyaka ingama-30 idlulileyo, sathenga eso sakhiwo, sasikhupha ngokupheleleyo saza sasilungisa ngokupheleleyo ngokwemigangatho yamva nje ngo-2018/2019. Namhlanje ihambelana nomgangatho omtsha wokwakha njengendlu eyonga amandla 55.
Kumgangatho ophantsi kukho i-"Freiiraum Yakho" (www.yoga-rendsburg.de) apho i-yoga kunye nentshukumo yenzeka khona. Kukho amagumbi ama-2 kumgangatho ongaphezulu kunye nophezulu.
Indawo esembindini yeSchleswig-Holstein kwiCanal yaseKiel (NOK), enonxibelelwano olugqwesileyo lwezothutho kuzo zonke iindlela.
I-150 m ngeenyawo ukuya kwi-NOK kunye netonela yabahambi ngeenyawo ukuya e-Rendsburg, indawo yokumisa ibhasi phambi kwendlu, kwi-radius eyi-100 - 500 m: iihotele ezi-3, iindawo zokutyela ezi-4, igadi yebhiya, ii-ayisikrimu ezi-2, i-snack bar, i-hairdresser, ugqirha, echibini ngaphandle, yokubhaka (800m), iziko mboniso, Deula IYUNI-, Senvion, Max Bögel.
Umbuki zindwendwe ngu- Niels
U-Sonja usebenza kwisitudiyo se-yoga "i-Dein Freiraum" ecaleni kwendlu kwaye ukummandla okufutshane we-2/3 yosuku kwaye uyakuvuyela ukuphendula nayiphi na imibuzo kunye neengcebiso.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Westerrönfeld